ULTIMATE WAX SYSTEM | Steadfast Trading | Apex Auto Body Shop
CALIFORNIA GOLD PURE BRAZILIAN CRANABU WAX
# 05750, 16 oz. အရည် / #05550, 12 oz. အပျစ်
၎င်းသည် နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ Mothers ၏ Pure Brazilian Carnauba Wax ဖယောင်းကို ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ အကောင်းဆုံး အ၀ါရောင်ကာနာဘူးဝါးဆီဖြင့် ပြုလုပ်သဖြင့် တောက်ပမှုနှင့် ကာကွယ်ပေးမှု တို့တွင် သာလွန်ကောင်မွန်သည်။ ၎င်းသည် တိုက်စားခြင်းမရှိသဖြင့် သင်နှစ်သက်သလို မကြာခဏအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်ရန် တစ်ထပ်မက အသုံးပြုနိုင်သည်။
# 08100, 16 oz. အရည်
Mothers ၏ Micro-Polishing Glaze ကို ပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ဆေးသား၏ အရောင် ပေါ်လွင်မှုနှင့် စိုပြေမှုတို့ကို တိုးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အရောင်ပင်ဖြစ်စေ ဆေးသား၏ အင်္ဂါရပ်ကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေမည်ဖြစ်ပြီး ၀င်းလက်တောက်ပစေမည်ဖြစ်သည်။ Mocro-Polishing Glaze သည် အပြစ်အနာအဆာလေးများကို ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အမြင်မတင့်တယ်သည့် ချွတ်ယွင်း ချက်များကို သေးငယ်သွားအောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတွင် ဆေးသားမျက်နှာပြင် ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့် အလွန်ုနုညံ့သည့် ပေါလစ်တစ်မျိုးလည်းပါဝင်သည်။
# 07100, 16 oz. အရည်
၎င်းသည် အမြင့်မားဆုံးသောဖယောင်းစနစ်၏ အခြေခံအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤပေါလစ်သည် သံချေးတတ်ခြင်း ဖယောင်းအဟောင်းများ၊ စုပုံလာခြင်းနှင့် အခြားညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးကာ သင့်ဆေးသားကို သန့်စင်တောက်ပြောင်စေသည်။ ဤအနုစားပေါလစ်သည် အပြစ်အနာအဆာများကို ပြေပျစ်စေပြီး အစင်း အခြစ်လေးများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ သင့်ဆေးသား၏ ရုပ်သွင်သည် ပေါလစ်ဆေးကောင်းပေါ်တွင် မူတည်နေသဖြင့် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်ခန့် Mothers Pure Polish ကို အသုံး ပြုသင့်သည်။